မော်ဒယ်နိမ့် Android ဖုန်းများ HD Game အလန်းများထည့်သွင်း ကစားနည်းလေးပါ – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
Eye Color Changer Pro v1.2.8 APK 2MB Internet Download Manager 6.16 Next Launcher Widgets & Live Wallpapers ExtremeCopy v2.3.2 Pro For Pc 7MB X64 & X32 Jailbreak Features အဖြစ်မှ iOS7ရဲ့ Features အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သော Features များ Home
Published On: Thu, Nov 1st, 2012 Android Tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး မော်ဒယ်နိမ့် Android ဖုန်းများ HD Game အလန်းများထည့်သွင်း ကစားနည်းလေးပါ
Tags Shareပို့စ်ရေးသားသူ- Kar Yan (MMUG)
ကဲကဲ မော်ဒယ်နိမ့် ဟန်းဆက်များ ဥပမာ ကျွန်တော်ဖုန်းလေး U8818 လေးကို နမူနာယူပြီးပြမယ် ဗျို့
ကဲကဲ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ဗျို့http://down.muzhiwan.com/mzwandroid/mzw.apk ဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲ မှာ ရမ်းလိုက် မားကပ်လေးပါပဲ လိုချင်တဲ့ဂိမ်းကိုဒေါင်းနိုင်ပါတယ် နောက်ဆုံးထွက် ဂိမ်းတွေကအစရှိတယ်
အရင်ဆို ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေမှာ Asphalt7မပြောနဲ့ Asphalt5တောင်အနိုင်နိုင်ရယ် ဆော့ရတာပါ
အခုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ သူတို့ပြောပြတာကတော့ apk နဲ့ gpk နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ ကျွန်တော်အခုပေးတဲ့ မားကပ်လေးကတော့ gpk လေးပါ သူကိုဒေါင်းလိုက်ရင် data file တွေ ထပ်ဒေါင်းစရာမလိုပါဘူး ရလာတဲ့ gpk ဖိုင်လေးကို ကွန်ပြူတာမှာရမ်းဖို့ ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုလိုပါသေးတယ် အဲဒါလေးကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
အဲဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ကွန်ပြူတာမှာရမ်းပြီးရင် PC မှာ Apk ဖိုင်တွေကို အိုင်ကွန်လိုဂိုလေးအတိုင်းပေါ်ချင်ရင် ဟိုဟာသွင်းရ ဒီဟာသွင်းရ အဲတာတွေမလိုတော့ပါဘူး အဲဒီထဲမှာရှိတဲ့2MB ပဲရှိတဲ့ ကောင်လေးကို အင်စတောလုပ်လိုက်တာနဲ့ PC မှာ Apk ရဲ့ App လိုဂိုလေးတွေပေါ်လာပါပြီ စက်လဲ ရီစတတ်ချစရာမလိုပါဘူး
အဲဒီမှာ ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ gpk ဖိုင်လေးကို double click လုပ်လိုက်ယုံဖြင့် ဖုန်းထဲကို ဒါရိုက် အင်စတောလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းထဲကို install လုပ်ချိန်မှာ USB debugging ကို on ထားရပါမယ်
ကျွန်တော်လဲရေးတာအခုမှစရေးတာမို့ အမှားတွေလဲအများကြီးပဲနေမှာ ပါ ဆရာကြီးလဲမ
ဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်လိုဘ၀တူတွေ ဂိမ်းဆော့နိုင်ဖို့ မျှဝေချင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အားလုံးပဲ HD Game အလန်းများကစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
iPhone မှ Android phone သို့ Contacts များကို Copy/Move ပြုလုပ်ခြင်း
samsung galaxy S4 korea version SHV-E300S လေးကို root မယ်နော်
ZTE V960 Skate root လုပ်နည်း
11 comments on “မော်ဒယ်နိမ့် Android ဖုန်းများ HD Game အလန်းများထည့်သွင်း ကစားနည်းလေးပါ”	Sithu on November 2, 2012 at 6:44 am said:
APK – GPK Software က စာတွေက အတုံးတွေပဲ ပေါ်နေတယ် .. တရုပ်စာတွေလားမသိဘူး.. မဖက်တက်လို့ ရှင်းပြပါလား ???
Reply ↓	hansu on November 3, 2012 at 2:44 am said:
အကို download ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ link ကသေနေတယ် ကူညီပါလား ဖြစ်နိုင်ရင် mail ပို့ပေးပါလား
Reply ↓	ကောင်းကောင်း on November 4, 2012 at 8:22 am said:
u 8818 က asphalt7ဆော့လို့ရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တောင်အခုထည့်ထားတာ။
asphalt7မကဘူး Pes2012,assiancreed,deadtrigger, တော်တော်များများရပါတယ်ဗျ။
Reply ↓	Win Win on November 5, 2012 at 3:38 am said:
Sir, When i download Real Football 2013 and Temple Run from the muzhiwan market in the phone it comes with apk file only. Sir Can u reply something to me please??
Reply ↓	pyaesone on November 10, 2012 at 2:48 pm said:
ကောင်းကောင်းပြောသလို u8818 က asphalt7ေ၇ာ6ေ၇ာရပါတယ်
Reply ↓	Gurdian Angel on December 1, 2012 at 7:07 am said:
Reply ↓	htoo aung on January 23, 2013 at 4:06 am said:
link တွေ down မရဘူးပြန်တင်ပေးပါအုံးအကိုရေ
Reply ↓	Happy Virus on February 4, 2013 at 4:43 am said:
Reply ↓	tunhtetmyat on April 15, 2013 at 2:58 am said:
HTC phone တွေကြတော့ DRIVER ရှိဘူးလား ဘယ်လိုမသွင်းလို.ရဘူး
Reply ↓	ဝေလင်း on April 25, 2013 at 8:54 am said:
http://www.mediafire.com/?ffmhfjzm2f7vdth ဒီလင့် က သေနေတယ်. . . .
Reply ↓	minthu on April 25, 2013 at 9:32 am said:
GPK file တွေကို 7-zip ဆိုတာနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာဖြည်လို့ ရပါတယ် ကျွန်တော်ဆို ဒရိုင်ဗာ မရှိလို့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်
Paing Nyein Oo on HUAWEI OFFICIAL FIRMWARE များစုစည်းမှုtayzaraung on Huawei C8813/C8813D,G520-0000,Y300-0000,Y300C,G510-0010 အကုန် ROOT လုပ်မယ်tayzaraung on Android ဖုန်းအားလုံးကို Root လုပ်နိုင်တဲ့ V Root v1.4.0Myat Min Soe on iOS6အထက်မှာ Jailbreak မလုပ်ပဲ Cracked App သွင်းနည်း။Myat Min Soe on iPhone 4, 4S and5မှာ Developer Account (သို့) UDID activation code မလိုဘဲ iOS7beta 1 တင်နည်း Android Development